Soo dejisan EaseUS Todo PCTrans 11.6 Free iyo Pro – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaEaseUS Todo PCTrans
Bogga rasmiga ah: EaseUS Todo PCTrans
EaseUS todo PCTrans – software ah si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya kombiyuutarada kala duwan. software waa awood si ay u gudbiyaan faylasha ee noocyada iyo tirada kala duwan iyada oo loo marayo shabakad agtaada ah ama iyadoo la abuurayo image file a. EaseUS todo PCTrans kuu ogolaanayaa inaad eegista wareejiyo ah software iyo xogta loo baahan yahay. software soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan files for search ugu waxtarka badan ee files. Sidoo kale software awood si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya drives maxaliga ah. EaseUS todo PCTrans leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
Transfer of the files of noocyo kala duwan
The kala iibsiga xogta la xushay
Transfer of files u dhexeeya drives maxalliga ah
Transfer of data ka soo nidaamka 32-bit ah in nidaamka 64-bit ah
Soo dejisan EaseUS Todo PCTrans
Faallo ku saabsan EaseUS Todo PCTrans
EaseUS Todo PCTrans Xirfadaha la xiriira